Lufthansa na-ewebata azịza IT maka njem na-aga n'ihu na mbugharị mbugharị
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ kacha ọhụrụ na Germany » Lufthansa na-ewebata azịza IT maka njem na-aga n'ihu na mbugharị mbugharị
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ kacha ọhụrụ na Germany • News • Ịrụ ọrụ • Technology • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Site na Squake, ngalaba digitalization etiti nke Lufthansa Group na -ebuputa usoro nkwụghachi ụgwọ CO2 nke ezubere maka ụlọ ọrụ sitere na njem, njem na ụlọ ọrụ njem niile.
Ngwọta IT ọhụrụ a na -enyere ụlọ ọrụ aka iwebata onyinye na -adigide maka ndị ahịa na Pọtụfoliyo ngwaahịa ha.
Ikpo okwu na -akwado iru ebumnuche mbenata CO2 yana ime ka ntughari gaa na agaghari agaghari.
Ndị ụlọ ọrụ nwere ike jikọta njikọ Squake n'ime ọnụ ụzọ ịntanetị nke ha.
Ndị ahịa na -achọwanye njem na -adigide na onyinye agagharị. N'otu oge ahụ, ụlọ ọrụ na -achọkwa ụzọ ha ga -esi nweta ebumnuche ebumnobi ha. Ụlọ ọrụ Lufthansa Innovation Hub na -ejizi ụzọ ọhụrụ egbo mkpa a.
Na Squake, ndị Lutù LufthansaNgalaba ngalaba digitalization etiti na -ebuputa usoro nkwụghachi ụgwọ CO2 nke ezubere maka ụlọ ọrụ site na njem, njem na ụlọ ọrụ njem niile. Site n'iji ngwa mmemme ngwa (API) nwere ike ugbu a gbakọọ ma mebie ikuku CO2 nke ọrụ ha na -enye. Ngwọta ọhụrụ ahụ na -enye ha ohere ịzụlite ngwaahịa na -adigide nke ahaziri nke ọma maka mkpa ndị ahịa ha.
“Ahịa njem na agagharị agagharị na -achọ ngwa ngwa ihe ngwọta iji bulie nkwado. Azịza anyị maka nke a bụ Squake mmalite teknụzụ ihu igwe, nke na -enyere ụlọ ọrụ aka imepe mmepe ha nke ngwaahịa na -adigide, "Christine Wang, Onye isi njikwa Lufthansa Innovation Hub kwuru. “Site na Squake, anyị na -enwe ike ime ka ahụmịhe iwe anyị dị mfe karịa ụgbọ elu. Ọ ga -ekwe omume nweta nkwado na ogologo oge ma ọ bụrụ na anyị na -arụkọ ọrụ ọnụ, ọ bụ ya mere anyị ji dabere na imekọ ihe ọnụ n'ahịa na n'etiti ụlọ ọrụ ndị na -esonye. Ọhụụ anyị maka Squake bụ na ọ ga-eweta 'ọkpụkpụ azụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ' maka njem na ngagharị. "
Nke a bụ otu Squake si arụ ọrụ
Mgbe ndị ahịa nke ụlọ ọrụ na -ahụ maka njem n'ịntanetị (OTA) na -ede akwụkwọ njem site na iji ụdị ụgbọ njem dị iche iche, dịka ụgbọ ala mgbazinye, ụgbọ elu, ụgbọ mmiri, bọs, ikpo okwu na -agbakọ ikuku CO2 na -akpaghị aka na njem ahụ dum. Ndị ahịa nwere ike mezie mkpofu anwụrụ ọkụ n'oge usoro ntinye akwụkwọ.
Ndị ụlọ ọrụ nwere ike jikọta njikọ Squake n'ime ọnụ ụzọ ịntanetị nke ha. Nke a pụtara na ha nwere ike ịnye “ọnụego akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ” ozugbo ma ọ bụ mee onyinye ha niile CO2 na-anọpụ iche. Mbido izizi ndị Europe sitere na njikwa njem, ngagharị ngagharị, na ngwa lọjistik na -eji ọrụ ahụ eme nke ọma.
Dan Kreibich, onye ndu ngo nke Squake kwuru, "Uru na nkwado ga -arụkọ ọrụ ọnụ." “Anyị na -enyere ụlọ ọrụ aka iweta onyinye na -adigide n'oge kachasị dị mkpirikpi nke ahaziri nke ọma maka ndị otu ha lekwasịrị anya. Anyị kwenyesiri ike na ngwaahịa na -adigide na -enye aka n'uto uto ahịa. ”